Iindawo ezibizwa ngokuba ngamaziko aMazwe aMazwe asekudala
Iindawo ezibizwa ngokuba yiindawo zokuhlala kwilizwe elidala
Uluhlu luni na phakathi kwephondo laseNova Scotia eCanada naseFransi eNewledonia e-Ocean Pacific? Ukuqhagamshelana empeleni ngamagama abo.
Ngaba uye wakha wazibuza ukuba kutheni kwiindawo ezininzi zehlabathi zokufuduka ezifana neUnited States, eCanada nase-Australia kukho indawo eninzi yokuhlala kunye namagama afana neNew Denmark, iNew Sweden, iNew Norway, iNew Germany, njl. Enye yelizwe lase-Australia libizwa ngokuba yiNew South Wales.
Ezi ndawo 'ezitsha' zendawo - iNew York, eNew England, eNew Jersey kunye nabanye abaninzi kwiLizwe elitsha ngokuqinisekileyo libizwa ngokuba yi 'yokuqala' kwiLizwe Elidala.
Emva kokuba 'ukufumanisa' kwamaMerika kubalulekile ukuba amagama amasha avele. Imephu engenanto ifunekayo ukuba igcwaliswe kuyo. Ngokuqhelekileyo iindawo ezintsha zazibizwa ngeendawo zaseYurophu zendawo ngokungongeza 'entsha' kwigama loqobo. Kukho iinkcazo ezinokwenzeka ezi zinto zikhethiweyo-umnqweno wokukhunjulwa, ukuvakalelwa kwemizi, ngenxa yezizathu zezopolitiko, okanye ngenxa yobungqina bezinto ezibonakalayo. Idla ngokuphindaphindiweyo ukuba amagama amagama adume kakhulu kunezona zintlandlolo, kodwa kukho iindawo "ezimbalwa" eziye zanyamalala kwimbali.
Eyaziwayo "Iindawo ezintsha
I-Ngilani kunye ne-New England zidume kakhulu - zombini indawo ziyaziwa kwihlabathi jikelele. Kuthekani ngezinye iintlanga zaseYurophu ezenze isigqibo sokuseka 'iinguqulelo ezintsha' zelizwe?
I-New York, eNew Hampshire, eNew Jersey, eNew Mexico iindawo 'ezine ezintsha' eUnited States.
Isixeko saseNew York, esinike igama kwigarhulumente, linomdla umdla. Isixeko saseNgesi saseYork 'nguyise' yenguqulo entsha edumile. Ngaphambi kokuba yinxalenye yeenkoloni zaseBrithani eNorth America, iNew York yayiyinhloko yeli koloni eyaziwa ngokuba yiNew Netherland kwaye yayinegama eliqhelekileyo elitsha eNew Amsterdam.
Incinci encinane eHustshire eningizimu yeNgilani yanika igama layo eNew Hampshire, eNew England. I-British yeSixeko esiseNtlalontle yaseJersey, enkulu kunazo zonke zeCanes Islands e-Atlantic Ocean, iyona 'yasekuqaleni' yaseNew Jersey. Kuphela kwimeko yeNew Mexico akukho uxhumano lwe-transatlantic. Igama layo lichazwe ngokucacileyo kwimvelaphi enxulumene neembali zobudlelwane baseMelika naseMexico.
Kwakhona kwimeko yeNew Orleans, isixeko esikhulu kunazo zonke eLouanaana, esiyimvelaphi yesiFrentshi. Ukuba yinxalenye yeNew France (namhlanje iLouanaana) isixeko saqanjwa ngokuba ngumntu obalulekileyo-iDuke wase-Orleans, i-Orleans eyisixeko kwisixeko saseLoire eCentral France.
Iindawo eziDala eziDumo
I-France entsha yayiyinkokheli enkulu (1534-1763) eNyakatho yeMerika ejikeleze iinxalenye zeCanada kunye ne-central US. Umqhubi owaziwayo waseFrancis uJacques Cartier kunye nohambo lwakhe lwaseMelika wasungula le nguqulelo entsha yaseFransi, nangona kunjalo kwaphela malunga neenkulungwane ezimbini kwaye emva kokuphela kwemfazwe yaseFransi neyamaNdiya (1754-1763) ummandla wahlula phakathi kwe-United Kingdom ne-Spain.
Ukuthetha ngeSpeyin, kufuneka sichaze imbono yaseNew Spain, omnye umzekelo wendawo eyayingaphandle kwelinye ilizwe elibizwa ngokuba lizwe elibizwa ngelizwe.
I-Spain yaseNtshonalanga yayingamazwe aseNyakatho yaseMelika, ezinye iziqithi zaseCaribbean kunye neendawo ezisemzantsi-ntshona ze-US Ubukho balo buhlala iminyaka eyi-300. Ngokusemthethweni, yasungulwa ngokukhawuleza emva kokuwa kolawulo lwama-Aztec ngowe-1521 kwaye lwaphela ngokuzimela kukaMexico ngo-1821.
Olunye Uluhlu "Oludala" kunye "neNew"
AmaRoma asebenzisa igama elithi Scotia ukuchaza i-Ireland. IsiNgesi sasisebenzisa igama elifanayo kwi-Middle Ages kodwa ukuba libhale indawo esiyazi ngayo njengeSkotland namhlanje. Ngoko ke iphondo laseKhanada eNova Scotia ligama linguSkotland.
AmaRoma abhala iScotland njengeCaledonia ngoko isiqithi samanje saseFrance saseCaledonia ePacific yinguqulelo 'entsha' yaseScotland.
INew Britain neNew Ireland ziqithi kwiBismarck Archipelago yasePapua New Guinea. Igama elitsha laseGuinea ngokwayo likhethwa ngenxa yokufana kwendalo phakathi kwesi siqithi kunye nesithili saseGuinea e-Afrika.
Igama elidlulileyo laseBrithani igama lesizwe sasePacific iVanuatu yiNew Hebrides. 'AmaHebride' asekudala yi-archipelago ukusuka ecaleni lasentshonalanga yeBrithani enkulu.
I-Zealand yiyona ndawo isiqithi esikhulu kwisiDanishi apho iCopenhagen i-capital city ikhona. Nangona kunjalo, ilizwe laseNew Zealand ngokuqinisekileyo liyindawo edumileyo kuneyona yokuqala yaseYurophu.
I-Granada entsha (1717-1819) yayiyintando yaseSpain eMatriki eMerika ngokujikeleza imimandla yamhlanje iColombia, i-Ecuador, iPanama neVenezuela. IGranada isixeko kunye neyona ndawo ibalulekileyo yembali e-Andalusia, eSpain.
I-Holland entsha yayingumgama wase-Australia kangangeminyaka engama-mabini. Igama laphakanyiswa ngu-Abel Tasman ongumdatshi wase-Dutch ngo-1644. Ngoku, i-Holland iyingxenye yeNetherlands.
Intsha yase-Australia yindawo yokuhlala engaqhelekanga yaseParaguay ngabahlali be-Australia ekupheleni kwekhulu leshumi elinesithoba.
Gemini ngoLuthando - Ukuhambelana kweZodiac
IMfazwe yaseVietnam: iMelika
Iimpawu zeDinosaurs zilingakanani?
UAbhigayil Williams wovavanyo lweSallowm Witch
Indlela yokufumana i-Sheepshead enqabileyo
Iinyanga ezi-4 zokwakha indlu entsha
Umthandazo kuSt Mary Magdalene
Imbali yeFriji kunye neeFreezer
Hitler kwiSecularism kunye no-Allah
I-Manhattan School of Music Admissions
15 I-Brutally Funny 'iMidlalo yeeMboni' zeTrone
Arnold Palmer kwi-Majors: Iinqaba zakhe kunye no-Misses
Ukuguqulwa kweMelika: iRhuluneli uSir Guy Carleton
INew York Metropolitan Area
I-Louisiana Tech University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Inkcazo yeSizwe yonke Inkcazo